Nkesa GNU / Linux 2019 ka eweputa ihe na oru gi | Site na Linux
Nkesa GNU / Linux 2019 ka eweputawanye oru gi
N'oge dị iche iche a na-ebipụta ụfọdụ nyocha banyere ụfọdụ nkesa ma ọ bụ ndepụta nke distros kachasị mma nke afọ ọ bụla, wdg, mana oge a ka anyị chọrọ iwepụta ndepụta na ụfọdụ n'ime kesara nkesa kachasị mma maka ọrụ dị iche iche. Ka ị na-achọpụta, nkesa ndị a ga-agbaso usoro chọrọ iji rụpụta ọrụ n'ezie, ya bụ, na anyị anaghị etinye oge n'ịgbalị ime ihe ndị ọzọ karịa ọrụ ma ọ bụ dozie nsogbu ndị sitere na ...
Na usoro nke edemede na anyị ga-agụnye, o doro anya na anyị agaghị ekpuchi ọrụ niile dị, mana ụfọdụ n'ime ndị kachasị ewu ewu, na-ekpughe otu / s nkesa / s maka ụdị nke ọ bụla. N'ụzọ doro anya, ọ dịghị mmiri ozuzo na-amasị onye ọ bụla masịrị, na site na nke a, m na-ekwu na n'ezie ọtụtụ ndị ọrụ anaghị ekwenye na nhọrọ ahụ ma ọ bụ chee na ụzọ ọzọ dị mma. O doro anya na ha nweere onwe ha iche ihe ha chọrọ ...
N'ezie, mgbe ha jụrụ m nke kacha mma nkesa, m na-aza otu ihe mgbe niile: «Nke kachasị amasị gị na nke kachasị mma«. Ikekwe ị na-enwe ntụsara ahụ na Arch, ị meela ya, ma chee na ọ kachasị mfe. Gịnị mere? Agbanyeghị na ọtụtụ ndị ọrụ na - eche otu ọzọ, mana ị ga - eche mgbe ọ bụla gburugburu ebe ị ga - eji nkà ọzọ. Otu na-aga maka ngwá ọrụ ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ndị ndezi ederede: vim, vi, emacs, nano, gedit,… kedụ ihe dị iche ọ na-eme?! Nke kachasị mma bụ nke kachasị gị mma.
Ma maka ndị ahụ ọrụ ndị ọhụrụ Na mpaghara a, ha nwere ike chọọ nduzi n'ihi na ha enweghịzị ọkacha mmasị ma ọ bụ preetị. Ọfọn maka ha, anyị na-aga ebe ahụ:
4 Ihe osise na multimedia:
5 Sayensị na injinia:
Enwere ọtụtụ, ọtụtụ nkesa echere Mmụta, na ikekwe ha so na ndị kachasị mkpa n'ihi mkpa ngalaba ngalaba ọzụzụ ahụ dị. Typedị distros a na-abịa na usoro sọftụwia etinyere maka ụmụaka, ọ bụ ezie na ha nwekwara maka ụmụ akwụkwọ toro eto na maka ndị ọrụ nkuzi.
emegheSUSE Li-fe bu ihe emeghe OpenSUSE nke ewuru distro agụmakwụkwọ a. O nwere otutu ngwanrọ etinyegoro maka klaasị na ebe agụmakwụkwọ. N'otu aka ahụ, ọ nwere ihe nkesa KIWI-LTSP, iji nwee ya ọbụlagodi na enweghị teknụzụ.
Edubuntu Ọ bụ a maara nke ọma Ubuntu dabeere distro. O nwere uru nile nke Ubuntu, mana enwere ọtụtụ nchịkọta emere maka agụmakwụkwọ ga-amasị ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi.
Dị ka ị maara, enwere ọtụtụ ndị ọzọ, mana abụọ ndị a bụ ndị na-adọta uche m. Agbanyeghị na ịchọrọ ịmatakwu obere maka ụmụaka, ị nwere ike ịmasị ọrụ dị ka Bslọ nyocha shuga o Ihe egwuregwu.
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ iwu ihe nkesa nke ụdị ọ bụla, egbula oge, e nwere mmadụ abụọ bụ ndị eze na-enweghị mgbagha: CentOS y Debian. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhọrọ RHEL ma ọ bụ SLES nke Red Hat (nke IBM nweziri) na SuSE n’otu n’otu. N'ihe banyere CentOS, ọ dabere na koodu RHEL ma meghee kpamkpam ma nweere onwe ya, ndị obodo na-elekọta ya. Ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ nchịkọta RPM. Ọ bụrụ na ọ ga - atụba gị DEB karịa, gaa na ọrụ ochie Debian mara mma.
Na nke a, anyị nwere PopOS, Ubuntu, Arch Linux y Gentoo dị ka nhọrọ kacha mma. Kedu ihe kpatara gị? Ọfọn, nke mbụ bụ ihe ọhụrụ, ọrụ pụtara ọhụrụ na nso nso a sitere na ụlọ ọrụ System76 a ma ama na enwere m mmasị ịrara ndị otu gị si n'otu ụlọ ọrụ a dị ka ngwa ọrụ mmepe gị kacha mma. Mana o doro anya, Ubuntu bụkwa otu n'ime ndị na-ebu ibu, ọ bụghị naanị n'ihi àgwà ya ama ama, mana n'ihi ịbụ onye ama ama, ị ga-ahụ ọtụtụ IDE, ngwugwu na akwụkwọ ịchọrọ maka mmepe. N'ikpeazụ, Gentoo na Arch Linux abụghị ihe kachasị mfe, mana ha bụ nnukwu gburugburu abụọ iji rụọ ọrụ, na-agbago ha site na ncha ma na-eme ka ha kwekọọ na mkpa anyị, mgbanwe nke ndị ọzọ adịghị enye ...
Ihe osise na multimedia:
Maka ọrụ multimedia na eserese eserese, Ubuntu ga-abụkwa ezigbo nhọrọ, n'ezie ọ bụ maka ihe ọ bụla. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ zuru oke-ga-eme nke ọma maka ego nke ngwanrọ, ndị ọkwọ ụgbọala, na akwụkwọ ị ga-ahụ ga-enyere gị aka. Ma, ọ ga-amasị m iwebata gị Fedora Design Suite y Ubuntu Studio, ebe ị ga-enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nile site na iweta nchịkọta ndị arụnyere. ArtistX bụ nhọrọ ọzọ na ọtụtụ ndị ọzọ, mana dịka m na-ekwu, ị ga-ebute ụzọ ...
Sayensị na injinia:
Echere m na nke mbụ batara n'uche bụ Scientific Linux (ugbu a CCentOS), ama ama nke European CERN distro. Ma e nwere ndị ọzọ na-eche banyere sayensị, ọ bụ ezie na ikekwe otu n'ime ihe kachasị amasị ndị ọkà mmụta sayensị. Nhọrọ ọzọ Linux Poseidon. Kama, maka bayoloji na geology, BIO-Linux y OsGeo ha abụọ bụ oke nhọrọ. Maka ndị injinia na-arụ ọrụ na CAD, AKELKỌ ọ na-atọ ụtọ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị ọzọ, mana kpachara anya n'ihi na e leghara ụfọdụ anya anya ma ọ bụ gbahapụla ha.
Ọ bụrụ na ịrara onwe gị nye na okwu nke nchekwa, n'ezie ọkacha mmasị gị, ọbụlagodi nke m bụ, bụ Kali Linux, Switzerland Agha Knife nke Pentesting. Ọzọ ike ọzọ bụ Icheku OS. Mana enwere nnukwu ọrụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-emeso ihe a kapịrị ọnụ dị ka nyocha netwọdụ ikuku, nyocha ọhụụ, wdg.
N'okwu ahụ, Santoku maka nyiwe mkpanaka, Cainema EGO ha ga-abụ ọkacha mmasị gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrara onwe gị nye kpọmkwem na nyocha weebụ, wee lee anya eh. Na ngwụcha, maka nyocha nyocha nke WiFi, otu ọkacha mmasị m yana kwa ọrụ nwere ụtọ Spanish: Wifislax.
Echere m na o nyeere gị aka ikpebi ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Nkesa GNU / Linux 2019 ka eweputawanye oru gi
Wepụtara ọhụrụ version nke VirtualBox 6.0.2 mara ya nkọwa na nwụnye
GitHub kwupụtara mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke GitHub Desktop 1.6